Miverina ny fandefanasa mpiasa any ivelany | NewsMada
Miverina ny fandefanasa mpiasa any ivelany
Fantatra, omaly nandritra ny fampitam-baovao nataon’ny minisitry ny Fampianarana teknika sy ny fanofanana momba ny asa, tetsy Ampefiloha, fa hiverina indray manomboka izao ny fandefasana mpiasa any ivelany.
Hentitra ny fepetra takina amin’ireo orinasa mpandefa mpiasa. 40 ireo orinasa miandraikitra izany ankehitriny saingy 11 ihany ireo efa nahafeno ny fepetra amin’ny fanarahan-dalàna. 4 amin’ireo mandefa mpiasa any amin’ny Nosy Maorisy, orinasa roa mandefa mpiasa any Seychelles, 3 mandefa any Hong Kong ary ny roa ambiny eo am-pamitana ny taratasy.
Tsy tokony hitakiana vola na kely aza ireo mpiasa haondrana. Efa mahazo 450 dolara isaky ny mpiasa raha kely indrindra ireo orinasa mandefa olona.
Mila mazava avokoa ny antontan-taratasy rehetra na ny eto an-toerana na avy amin’ny masoivoho any ivelany indrindra avy amin’ny mpampiasa mba tsy hisian’ny olana.
Mbola fepetra manokana kosa no miandry ireo mpandefa mpiasa any amin’ny firenena arabo izay nahitana olana na nampiatoana ny asa.
Ankoatra ny fepetra hentitra noraisina ho an’ireo orinasa, tsy maintsy hofanina ihany koa ny tanora izay halefa hiasa any ivelany. Mila mahay miteny frantsay sy teny anglisy ary mahafantatra tsara ny kolontsaina sy ny fomba fiaina.
Tsy maintsy mandalo eo amin’ny masoivoho any amin’ireo firenena andefanasa mpiasa ny taratasy fahazoan-dalan’ny orinasa handefa mpiasa any amin’ilay firenena. Roa taona ihany ny faharetan’izany fahazoan-dalana izany ka mila havaozina hatrany.
Marihina fa efa nafindra hotantanan’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy ny fanofanana momba ny mikasika ny fampananana asa ary anisan’izany ity fandefasana mpiasa any ivelany ity.
Tanjona amin’izany ny hisian’ny fandrindrana ny fanabeazana sy fampianarana hamaly ny filàna eo amin’ny tontolon’ny asa.